प्रचण्डबाट ‘धोका भयो’ भन्दै माधव नेपालले थाले परामर्श – Ktm Dainik
२०७९ असार २० सोमबार
मकवानपुरमा जन्ती हिडेको ट्याक्टर दुर्घटना
भारत सरकारले उपहारमा दियो ७५ एम्बुलेन्स र १७ विद्यालय बस
६ महिनामा दुई लाख ३७ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
१३ केन्द्रीय विभागमा सचिव मनोनित, को कहाँ ?
एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिका पठाएको छैन : परराष्ट्र प्रवक्ता लम्साल
बल्खुमा गाडीको ठक्करबाट पाँच वर्षीय बालकको मृत्यु
प्रचण्डबाट ‘धोका भयो’ भन्दै माधव नेपालले थाले परामर्श - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्रचण्डबाट ‘धोका भयो’ भन्दै माधव नेपालले थाले परामर्श
सोमबार, वैशाख २२ २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट गहिरिइसकेको थियो । उनी सम्झौताका लागि बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव सम्म गर्न पुगेका थिए । यतिसम्मकी बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरि माधव नेपाल निकटकालाई दिन तयार भइसकेका थिए ।
बामदेवको साथका बाबजुद प्रचण्डबाट साथ पाए ओलीलाई ढाल्न सक्छु भन्ने माधव नेपालको आँट बनिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा पुष्पकमल दाहालले नै ओलीलाई साथ दिए । अहिले आफूमाथि धोका भएको भन्दै नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटस्थसँग बसेर कोटेश्वरमा समिक्षा गर्न थालिसकेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार माधव नेपालले प्रचण्डबाट किन धोका भयो ? भनी खोज्न थालेका छन् । उनले प्रचण्डमाथि आशंका गरेका छन् । प्रचण्डलाई नेकपा बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसमा सबै शक्ति लेनदेन भएको बुझाई नेपाल पक्षको छ ।
. हामीले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्दैनौ: बाध्य भएर पाँचदलीय गठबन्धन बनाएका हौँ
. कोटेश्वरमा माधव नेपाल र मन्त्रीहरुबीच चर्काचर्की, बाहिरिन दुई शर्त
. पाँच दलीय गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहन्छ : अध्यक्ष नेपाल
. ‘ह्विस्कीको नसामा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउलान, सचेत रहनुहोस’ : नेपाल
. बालेनलाई बधाई दिँदै माधव नेपालले भने : सहकार्य गर्न तयार छु
ओली गलिसकेको अवस्थामा केही कार्डले काम गरेको छ । बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्ड बलियो भयो । यसले प्रचण्डलाई समेत सतर्क बनायो । यसैबीच अदालतबाट अकस्मात फैसला आयो । द्धन्द्धकालको मानवअधिकार हननको गम्भीर मुद्दामा आममाफी दिन नमिल्ने फैसला आयो ।
प्रचण्डका केही विश्वासपात्र नै ओलीको पक्षमा उभिएको देखिनथाल्यो । ओली हटाउन हुँदैन भन्न थाले । लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र दिनानाथ शर्माले पनि सार्वजनिक रुपमा बोले । यी बोलीहरु अर्थपूर्ण थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता पनि बढ्यो । भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् । यता ओली दिन बिराएर शितलनिवास छिर्न थाले । भण्डारीले भित्री रुपमा ओली र प्रचण्डबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको चर्चा चलिरहेको छ ।
शनिबारको सहमतिपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि दंग छन् । अब ओलीको राजीनामा मागिदैन भन्न थालेका छन् । बामदेव बोल्न छाडेका छन् । उनको ध्यान पाल्पा १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने रहेको छ ।
माधवकुमार नेपाल भने यसपटक एक्लाइए । शुरुमा ओलीलाई औंला ठड्याउने उनी नै थिए । तर, भैंसेपाटीस्थित बामदेव गौतमको निवासमा बनेको योजना त्यसै तुहिएको छ । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन एकढिक्का भएको प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेवको समूह यताउता पुगेको छ । अब २५ वैशाखमा बस्ने स्थायी कमिटि बैठकले धेरै तथ्यहरु खुलाउन सक्छ । को कता सबै यथार्थ बाहिर आउनसक्छ । कस्ले कसलाई कसरी धोका दियो विषय उठान पनि हुनसक्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, असार १७ २०७७ १९:३०:३१
हिलोले झपक्कै भिजेका युवायुवती (तस्बिरहरू)
कसरी घटाउने तौल ? यस्ता छन् उपायहरू
इश्वर पोखरेलको क्षेत्रमा रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारी
आज बस्दै कोइराला पक्षको बैठक
आफ्नै घर बिर्सिन्छिन् दीपिका
बोराभित्र भेटियो मानिसको शव
मौसमको कारण विभिन्न विमानस्थलमा उडान प्रभावित
प्रोजेक्टको काम लिएर आएकी युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार !